2022 ခုနှစ်တွင် WhatsApp ကိုမည်သို့စူးစမ်းလေ့လာနိုင်သနည်း Androidsis
Ignatius ခန်းမ | | Android application များ, လုံခွုံရေး, လဲ tutorial, Whatsapp
ဒီ post မှာကျွန်တော်ရှင်းပြတော့မယ် WhatsApp ကိုဘယ်လိုထောက်လှမ်းရမလဲ, ကို ဦး တည်တဲ့ post ကိုဖြစ်ပါတယ် တစ်ချိန်တည်းတွင် Terminal နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသော WhatsApp အကောင့်တစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်း၊ WhatsApp ကို operating system install လုပ်ထားသည့်ကွန်ပျူတာကိုမခွဲခြားဘဲကိုယ်ရေးကိုယ်တာကွန်ပျူတာမှတစ်ဆင့် desktop ဝက်ဘ်ဗားရှင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အကောင့်ကိုဖွင့်လိုလျှင်မဟုတ်ပါက WhatsApp ကိုခွင့်မပြုပါ။
WhatsApp ဝက်ဘ်အပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေကို အခြေခံ၍ ဤအပလီကေးရှင်းကိုတီထွင်သူများသည် WhatsApp ဝက်ဘ်က၎င်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောအားသာချက်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ WhatsApp ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာသုံးပြီးစဉ်းစားရန်လှည့်စားသော application တစ်ခု။ ၎င်းသည် WhatSapp အကောင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူညီသောဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုတွင်တစ်ပြိုင်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာတစ်ခုအားပယ်ဖျက်စရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်တို့ကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ အမှောင်ရည်ရွယ်ချက်, ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်းစား၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သူမည်သူမဆို၏ WhatsApp ကိုရယူသုံးစွဲနိုင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ကျင့်တရားသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသူလျှိုလိုသူ terminal ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအခြေအနေဖြင့်အနည်းဆုံးဆယ်စက္ကန့်ခန့်ကြာအောင် WhatsApp ကိုဖွင့်ရန်၊ WhatsApp ဝက်ဘ်ရွေးစရာကို နှိပ်၍ QR ကိုစကင်ဖတ်ရန်လိုအပ်သည်။ code that ဒါဟာ WhatsApp account ကို hack ချင်တဲ့ terminal ရဲ့ screen ပေါ်မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။
ယခုအချိန်အထိနှင့်တစ်စုံတစ်ယောက်မှရှောင်ရှားနိုင်သည့်အချိန်အထိကြာမြင့်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကို Google ၏ကိုယ်ပိုင် Play Store မှနာမည်အောက်ရှိလိမ်လည်လှည့်စားခြင်း (သို့) ကဒ်ထူပြားများမရှိဘဲဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။ WhatsApp အတွက် CloneZap.
1 CloneZap ကို download လုပ်နည်း
2 ဒါပေမယ့် application ကသူ့ဟာသူဘာလုပ်သလဲ။
3 Hackingtor သည် WhatsApp ကိုစူးစမ်းရန်အလုပ်လုပ်ပါသလား။
3.1 Hackingtor.co မှ
4 ဘာကိုထည့်သွင်းစရာမလိုဘဲ WhatsApp ကိုသင်စူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါသလား။
5 WhatsApp ကို QR ကုဒ်မပါဘဲစူးစမ်းလေ့လာရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလား။
6 သူသတိမပြုမိဘဲကျွန်ုပ်၏သား၏ WhatsApp ကိုမည်သို့ထောက်လှမ်းနိုင်မည်နည်း
7 WhatsApp ကိုစူးစမ်းခြင်းသည်ရာဇ ၀ တ်မှုတစ်ခုလား။
CloneZap ကို download လုပ်နည်း
CloneZap ကို Google Play စတိုးတွင်မရနိုင်ပါ။ သို့သော်၎င်းကိုအခြား Android application စတိုးများမှကူးယူနိုင်သည်။ Aptoide သည်လူကြိုက်အများဆုံးတရားဝင်မဟုတ်သောဂူဂဲလ်အက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သည် ဘယ်မှာရှိလျှင် လြှောကျလှာ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် CloneZap.
သင်၏စမတ်ဖုန်းတွင် Aptoide ကိုထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိပါက CloneZap ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်သင်ကြိုတင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လိုလိမ့်မည်။ Play Store တွင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်တရားဝင်ရရှိနိုင်သည့်လျှောက်လွှာတစ်ခုဖြစ်ရန်လိုအပ်သည် မသိသောမူလဇစ်မြစ်ကိုဖွင့်လိုက်ပါ အပလီကေးရှင်းကိုနောက်မှတပ်ဆင်ရန်။
ဒါပေမယ့် application ကသူ့ဟာသူဘာလုပ်သလဲ။
အဓိကအားဖြင့်ရည်ရွယ်သောလျှောက်လွှာ WhatsApp ဝက်ဘ်လုပ်ဆောင်မှုကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတချိန်တည်းတွင် Terminal များစွာတွင်တူညီသော WhatsApp အကောင့်ကိုသယ်ဆောင်နိုင်ခြင်း။၎င်းတွင် application-plan အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်ရှိပြီးမူလ WhatsApp နှင့်အလွန်မတူသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ WhatsApp ကို Android terminals တော်တော်များများတွင်တစ်ပြိုင်နက်တည်းထိန်းချုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်းအသိပေးချက်များမရရှိဘဲအသိပေးချက်များကိုလည်းလက်ခံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့စမတ်ဖုန်းကိုပြောင်းလဲလိုသည့်အခါတိုင်း WhstaApp အကောင့်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းနှင့်ဖျက်သိမ်းခြင်း။
ဤကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android တွင်ထည့်သွင်းထားသော web browser ကိုရိုးရှင်းစွာတုပနိုင်လိမ့်မည်။ « desktop version ကိုပြပါ» WhatsApp ဝက်ဘ်စာမျက်နှာကို ဝင်၍၊ WhatsApp အတွက် CloneZap ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြု စကင်ဖတ်ပြီးထားသော WhatsApp အကောင့်၏အဆက်အသွယ်များ၊ ချက်တင်လုပ်သမျှအားလုံးနှင့်ပေးပို့လိုက်သောမာလ်တီမီဒီယာဖိုင်များကိုကြည့်ပါ အသံသို့မဟုတ်အသံမှတ်စုများမှအပအခြားအရာများမှာ WhatsApp application တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ဖြစ်သော်လည်း WhatsApp ဝက်ဘ်၏ desktop version တွင်မည်သည့်ကွာဟချက်ကိုမျှပြသနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
ပို့စ်ရဲ့အစမှာငါဘယ်လိုပြောလဲ၊ အကြိမ်အနည်းငယ်မှတ်ချက်ပေးပြီးပြီ၊ ဤ application သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် WhatsApp အကောင့်အတွက်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည်ဒါပေမယ့်ဒါပေမယ့်ဘယ်သူကငါ့ကိုကောင်မလေးရဲ့ WhatsApp အကောင့်၊ အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဒါမှမဟုတ်ငါလိုချင်တဲ့သူနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ငါ့ကိုပြောတာလဲ။
ဒီကနေရတဲ့ရန်တစ်ခုတည်းသောအဆင်မပြေ ငါတို့လိုချင်တဲ့သူရဲ့ WhatsApp ကိုစူးစမ်းပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့စူးစမ်းလိုသူသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်လိုသော WhatsApp အကောင့်ကိုကိုယ်တိုင်ရယူရန်လိုအပ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏ WhatsApp ကိုစူးစမ်းလိုသည့်သူ၏စက်ပစ္စည်းကိုရယူသုံးစွဲရန်လိုမည်၊ WhatsApp အပလီကေးရှင်းကိုဖွင့်ရမည်။ WhatsApp ၏ setting ကိုနှိပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ Android တွင် install လုပ်ထားသော CloneZap For Android application မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထင်ရှားသော code ကို scan ရန် WhatsApp ဝက်ဘ်ရွေးစရာကိုလျင်မြန်စွာရွေးချယ်ပါ။
၎င်းသည်သင့်ကလေး၏ငယ်ရွယ်စဉ်နှင့်ပထမဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်းရှိချိန်တွင်သင့်ကလေး၏စကားပြောဆိုမှုများကိုထောက်လှမ်းရန်အထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သည်။ ဒီအတွက်သင်လုပ်ရမယ် whatsapp အခမဲ့ download လုပ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့အထက်တွင်ဆွေးနွေးခဲ့သောအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။ ၄ င်းသည် ၄ ​​င်းတို့၏သူငယ်ချင်းများနှင့်၎င်းတို့အချင်းချင်းပြောဆိုသောအရာများကိုထိန်းချုပ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံအိမ်၌ရှာဖွေရန်ခက်ခဲသောအခြားကလေးများနှင့်ပြpossibleနာများကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။
ငြီးငွေ့ဖွယ်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့တွင်ကျွမ်းကျင်မှုရှိပါက၊ သူလျှိုလုပ်လိုသူကိုကြီးကြပ်ခြင်း၊ အောင်မြင်ရန်အတွက် ၁၀ စက္ကန့်လောက်ကြာသောစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းတွင် သင်၏ WhatsApp အကောင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Android တွင်ကူးယူပြီး WhatsApp ကိုစူးစမ်းလေ့လာနိုင်သည် သူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြောဆိုမှုများကိုထိန်းချုပ်ရန်သို့မဟုတ်လိမ်လည်လှည့်စားလိုသောထိုသူ၏အကြောင်းဖြစ်သည်။
သင်သည် WhatsApp ကိုလေ့လာနေသည်ဟုသင်ထင်လျှင် application settings မှ WhatsAppWeb သို့သွားပါ သငျသညျ session ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သောအပေါ် devices များကြည့်ပါ။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်သင့်ကိုသံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိနေပါကသူလျှိုလုပ်ရန်ပြproblemနာမရှိဘဲပိတ်နိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းအကြံပြုသည့် privacy ပြproblemsနာများကိုရှောင်ရန် WhatsApp ကို update လုပ်ပါ အဆင့်မြှင့်တင်မှုတစ်ခုစီမှတိုးတက်မှုများကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးကတည်းကရရှိနိုင်သောနောက်ဆုံးထုတ်ဗားရှင်းသို့၎င်းတို့သည်များစွာသောသူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စကားဝိုင်းများ၏လုံခြုံရေးကိုတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်သည်။
သင်ဤ app သို့မဟုတ်အလားတူ app တစ်ခု၏သားကောင်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုထင်လျှင်ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြသည် WhatsApp ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲ.
Hackingtor သည် WhatsApp ကိုစူးစမ်းရန်အလုပ်လုပ်ပါသလား။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကလူကြိုက်များခဲ့သော Hackingtor ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လူတိုင်းကြောင်းဝက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းပြောနေတာခဲ့သည် မည်သည့် WhatsApp ကိုအကောင့်မှဝင်ရောက်ခွင့်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ယနေ့အချိန်အထိဝက်ဘ်စာမျက်နှာသည်အလုပ်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်တွင်မတူညီသောဝဘ်စာမျက်နှာနှစ်ခုရှိပြီးဆင်တူသည့်ဒိုမိန်းတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့် WhasApp အကောင့်ကိုမဆိုဝင်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အချက်အလက်များကိုရယူလိုသည့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ရုံသာဖြစ်သည်။ စာများ၊ ဗီဒီယိုများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်လိုလျှင်ရွေးချယ်ပြီး Hack WhatsApp အကောင့်ကိုနှိပ်ပါ။ ထိုအခါကျွန်တော်တို့ကိုပြသသောတိုးတက်မှုဘားပြလိမ့်မည် စွပ်စွဲရာအရပျကိုယူပြီးသော hack ၏ status ပြီးတော့ငါပြောတာကဒါကအလုပ်မလုပ်လို့မဟုတ်ဘူး၊
လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးတာနဲ့သူကငါတို့ကိုကမ်းလှမ်းသည် သမိုင်းနှင့်အတူနှစ်ခုလင့်များ ကျွန်တော်ဒီအကောင့်ကနေရွေးထားပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးအတွက်ငါ chats, images, နှင့်ဗီဒီယိုနှစ်ခုလုံးမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာ၊ ထိုအကောင့်၏အချက်အလက်နှင့်နောက်ဆုံးဖိုင်သည် ၂၉ MB သာဖြစ်ပြီး၎င်းသည် GB အမြောက်အများကိုသိမ်းပိုက်သင့်သည်။ ဒါကတစ်ခုခုမှားနေတယ်ဆိုတာပထမဆုံးဖော်ပြချက်ပါ။
လင့်ခ်နှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာသို့လမ်းကြောင်းပြောင်းသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ရုပ်ရှင်အကြောင်းအရာ (ဒုတိယအရိပ်အယောင်) ကိုကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဝန်ဆောင်မှုသည်အခမဲ့ဖြစ်သည် ငါ့အကြွေးဝယ်ကဒ်အချက်အလက်ကိုပေးပါကတ်၏နောက်ကျောတွင်တွေ့ရသော CVC (တတိယအချက်) ။
CVC အပါအ ၀ င်ဤအချက်အလက်အားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးအပ်ခဲ့ပါက၎င်းအချက်အလက်များကိုရယူသုံးစွဲသူမည်သူမဆိုသတိရသင့်သည်။ သင်ကတ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာ၌တည်၏။
ယခင် url နှင့်အလွန်ဆင်တူသောအခြား web page သည်aကိုပြသည် အများကြီးပိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသွင်အပြင်။ ရုပ်ရှင်စတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းနံပါတ် (ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆို) ရိုက်ရုံသာဖြစ်သည်။
ထို့နောက်၎င်းသည်ဟက်ကာရုပ်ရှင်ကဲ့သို့ပင်၎င်းသည်စတင်လိမ့်မည် ကုဒ်လိုင်းများပြပါ, ငါတို့ရိုက်ထည့်သောဖုန်းနံပါတ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ IP (ထိုလိုင်းများပေါ်တွင်ပြရန်ကျွန်ုပ်တို့၏တည်နေရာကိုသူတို့ထံမှရရှိသော) နှစ်ခုလုံးသည်မှန်ကန်မှုကိုဖော်ထုတ်ရန်ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနီးကပ်ကြည့်မည်ဆိုလျှင်ကွန်ပျူတာအကြောင်းသိပ်မသိသော်လည်းလုပ်ဆောင်ချက်၏ညွှန်ကြားချက်များကိုဒေသအလိုက်မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည်၊ အချိန်မရွေး https လိပ်စာကိုပြသခြင်းမရှိပါ ဒေတာသိမ်းဆည်းထားစေခြင်းငှါအဘယ်မှာရှိ သင်ပါမယ်ရယူနေကြတယ်။
မိနစ်အနည်းငယ်မျှကြာသောလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသွားသောအခါအပေါ်ပုံကိုပြသပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားအကြောင်းကြားသည် အောင်မြင်စွာ hacked ပါပြီ ကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်ထားသောနံပါတ်၊ စကားဝိုင်းအရေအတွက်နှင့်ပုံရိပ်များ၊ ဗီဒီယိုများနှင့်အသံမှတ်စုများကိုကြည့်ရှုနိုင်ခဲ့သည်။ စုစုပေါင်းအရွယ်အစား 1.89 GB ကို။ ယခုအရာခပ်သိမ်းယုံကြည်စိတ်ချရပုံရသည်။
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကဟက်ထားသောအချက်အလက်များကိုရယူရန်ကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့စက်ရုပ်မဟုတ်တာကိုစစ်ဆေးပါ။ တစ်ခုခုမှားကြောင်းပထမ ဦး ဆုံးအရိပ်အယောင်။ ကောင်းပြီ၊ အဆင်ပြေသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝင်စားသည့်အရာသည်ကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်ထားသော WhatsApp နံပါတ်ကိုမည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ hack လုပ်ခံရသည်သို့မဟုတ်အခြားလိမ်လည်မှုဖြစ်ကြောင်းသိရန်ဖြစ်သည်။ ယခု Unlock ကိုနှိပ်ပါ။
တနည်းကား၊ ယခင် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်စာမျက်နှာသို့ညွှန်ကြားထားပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသူကမ်းလှမ်းသောရုပ်ရှင်ကားများကိုကြည့်ရှုရန်မှတ်ပုံတင်ရန်တောင်းဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝန်ဆောင်မှုကို ၇ ရက်ကြာစမ်းသပ်နိုင်သော်လည်းလိုအပ်သည် CVC နှင့်အတူအကြွေးဝယ်ကဒ်ပြားအပြည့်ကိုထည့်ကြပါစို့ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံတွင်တရားဝင်ရရှိနိုင်သောအကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့အား ၀ င်ခွင့်ပေးရန်မည်သည့်နိုင်ငံကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်ကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး ဝဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုမှမရှိပါ အခြား WhatsApp အကောင့်များ၏အချက်အလက်များကိုရယူခွင့်ပြုသည်ဆိုပါကအနည်းဆုံးကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်ကြည့်ရှုနေသည့်ဝဘ်ဆိုဒ်တွင်တွေ့ရသမျှ
သင်မြင်သောဝက်ဘ်ဆိုက်အပြင် (ဂူဂဲလ်၊ ဝီကီပီးဒီးယား ... )၊ နေ့စဉ်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောဝက်ဘ်ဆိုက်အပြင်၎င်းသည်လည်းရှိသည် နက်ရှိုင်းသောဝဘ်လူတိုင်းမရရှိနိုင်သည့်ဝဘ်စာမျက်နှာများမှအချက်အလက်များ (ဒေတာဘေ့စ်များ၊ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုများ၊ ဝင်ရောက်ခွင့်အထောက်အထားများ) နှင့် အမှောင်က်ဘ်မည်သည့်အရာဝတ္ထုနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုတရားမဝင်ဟုယူဆနိုင်သည်။
Dark Web ကိုအထူး browser (သာ Thor အများဆုံးအသုံးပြုသော) နှင့်သာရနိုင်သည် WhatsApp ကိုအကောင့်လုပ်ပါ တကယ်တော့ (လိမ်လည်မှုအများအပြားရှိပါတယ်), ကအတိအကျစျေးပေါလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ဘာကိုထည့်သွင်းစရာမလိုဘဲ WhatsApp ကိုသင်စူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါသလား။
တတိယပါတီအက်ပ်ကိုမထည့်ဘဲအခြားသူတစ် ဦး ၏ WhatsApp အကောင့်ကိုဝင်ရောက်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ WhatsApp ကို Web service ကိုမှတဆင့် web.whatsapp.com ကိုကွန်ပျူတာတစ်ခုအနေနှင့်ဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ဘရောက်ဇာကိုအသုံးပြုခြင်း။
WhatsApp ဝဘ်ကိုကွန်ပြူတာ၊ လက်တော့သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာဟုထင်မြင်ရန်ဘရောင်ဇာအားလုံးမစီမံနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ browser သည် WhatsApp ဝက်ဘ်ကိုလှည့်ဖြားရန်စီမံပါကဘားကုဒ်ကိုပြလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်ဘားကုဒ်ဖြစ်သည် ကျနော်တို့ဝင်ရောက်ချင်သော terminal နှင့် scan ဖတ်ရမည်။
WhatsApp ကို QR ကုဒ်မပါဘဲစူးစမ်းလေ့လာရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလား။
Whatsapp.com ဝက်ဘ်ဆိုက်၌ဖော်ပြသော QR ကုဒ်သည်ထူးခြား။ တစ်ကိုယ်ရေဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ WhatsApp ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုလိုသောဖုန်းနံပါတ်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ဒီကုဒ်များ ကျပန်းထုတ်လုပ်ပြီးနေကြသည် သူတို့တစ်တွေဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုနှင့်ဆက်နွယ်ပြီးတာနဲ့အခြားအသုံးပြုသူများကိုပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
၎င်းသည် WhatsApp နံပါတ်ကို WhatsApp ဝက်ဘ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆက်စပ်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင့်စမတ်ဖုန်း၏ကင်မရာသည်အလုပ်မလုပ်ပါကသင် terminal ကိုမပြောင်းမချင်းဤ ၀ က်ဘ်ဝန်ဆောင်မှုကိုသင်အသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤအပိုင်းမှမေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်း - WhatsApp ကို QR ကုဒ်မပါဘဲစူးစမ်းလေ့လာရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလား။။ အဖြေကမဟုတ်ပါ၊ မဖြစ်နိုင်ပါ၊ လုပ်နိုင်သည်ဟုဆိုသူမည်သူမဆိုလိမ်နေသည်။
သူသတိမပြုမိဘဲကျွန်ုပ်၏သား၏ WhatsApp ကိုမည်သို့ထောက်လှမ်းနိုင်မည်နည်း
ငါယခင်ကဏ္inများ၌မှတ်ချက်ပြုထားသကဲ့သို့, WhatsApp ကိုအကောင့်ကိုရယူဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်း WhatsApp ကို web မှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ၀ င်ရောက်ရန်အခြားနည်းလမ်းမရှိပါ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုမည့်အက်ပလီကေးရှင်းမရှိပါ (ဖြစ်နိုင်လျှင်အဟောင်း Android ဗားရှင်းများတွင်) ။
သင့်ကလေး၏ WhatsApp ပြောဆိုမှုများကိုရယူရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ WhatsApp ကို Web ကိုသုံးနိုင်သည်WhatsApp ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကို desktop format ဖြင့်ပြသထားသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဖွင့်ရန် Browser ကို အသုံးပြု၍ ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်သင့်စမတ်ဖုန်းမှတိုက်ရိုက်၊
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီနည်းလမ်းကငါတို့ရဲ့သားကိုမကြည့်မချင်းဒီနည်းလမ်းကအကျိုးရှိလိမ့်မယ် အခြားကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်သင်ဖွင့်နိုင်သည့် WhatsApp အစည်းအဝေးများ။ သင်မသိသောအစည်းအဝေးများအားလုံးကိုသင်ပိတ်လိုက်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကလေး၏ WhatsApp ပြောဆိုမှုများအားလုံးကိုလက်လှမ်းမီတော့မည်မဟုတ်ပါ။
WhatsApp ကိုစူးစမ်းခြင်းသည်ရာဇ ၀ တ်မှုတစ်ခုလား။
စပိန်ရာဇ ၀ တ်မှုပုဒ်မ ၁၉၇ အရအခြားသူတစ် ဦး ၏ WhatsApp ၏စကားပြောဆိုမှုကိုဆွေမျိုးအဆင့်အနေဖြင့်သူလျှိုလုပ်ခြင်းသည် privacy ကိုချိုးဖောက်, ဒါဆိုမင်းရဲ့အသိမိတ်ဆွေတွေရဲ့ WhatsApp အကောင့်ကိုစူးစမ်းမကြည့်ခင်၊ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်သောကြောင့်သင်နှစ်ကြိမ်စဉ်းစားသင့်သည်။
ဒါကငါတို့ရဲ့ကလေးတွေအကြောင်းပါ, အသေးအဖွဲ၏အသက်ပေါ်မူတည်။ နှစ် ဦး စလုံးလိမ်လှည့်ဖို့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး, နှစ် ဦး စလုံးနှစ် ဦး စလုံးမှကျိုးကြောင်းဆီလျော်နားလည်မှုရယူနိုင်ပါတယ်ကတည်းက, အရာပြောင်းလဲသွားတယ်။
ဤကိစ္စသည်မဟုတ်ပါကအရွယ်မရောက်သေးသူများကိုစပိန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈ ပုဒ်မခွဲ (privacy) ၏အခွင့်အရေးဖြင့်အကာအကွယ်ပေးထားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိရသင့်သည်။ သို့သော်ဥပဒေသိပ္ပံပညာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများအတွက်ကွန်ပျူတာသူလျှို (ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခေါ်ဆိုရန်) ကိုတရားမျှတစေသည် သူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီးသူတို့၏ရင်းနှီးမှုနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုကိုထိန်းသိမ်းထားပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » လုံခွုံရေး » WhatsApp ကိုစူးစမ်းလေ့လာနည်း (သို့) အကောင့်တခုခုကိုမတူညီသောဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုမှာထားခြင်း
အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈.၃ အရ "တရားရုံးအမိန့်မှအပအခြားဆက်သွယ်ရေးနှင့်အထူးသဖြင့်စာတိုက်၊ ကြေးနန်းနှင့်တယ်လီဖုန်းမက်ဆေ့ခ်ျတို့၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုအာမခံချက်ပေးထားသည်" ဆိုသည့်အချက်ကိုအခြားသူတစ် ဦး ၏ WhatsApp ၏အကြောင်းအရာကိုရယူသုံးစွဲနိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။ ၎င်းအခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်ပြီးရာဇ ၀ တ်မှုသက်ရောက်မှုများရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ဤဆောင်းပါး၌ပြုသကဲ့သို့လွတ်လပ်စွာလူသိမခံသင့်သောအလွန်အရေးကြီးသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဟိုင်း။ ၎င်းသည်အလွန်အသုံးဝင်သောဆောင်းပါးဖြစ်သည်။ နားမလည်တာတစ်ခုရှိသေးတယ်။ ငါဖတ်၊ ပြန်ဖတ်တယ်၊ ဒီဆောင်းပါးရဲ့စာရေးသူကငါတို့လိုချင်တာကိုသူလျှိုလုပ်လို့ရမယ်လို့ငါမမြင်နိုင်ဘူး။
Ole၊ လူတွေရဲ့သီးသန့်တည်ရှိမှုကိုကျေးဇူးတင်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးကိုဝေဖန်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ခင်ဗျားချဉ်းကပ်နိုင်တယ်၊ ဒါကဒီဘလော့ဂ်ကိုဖတ်တဲ့ငါတို့အားလုံးထင်တယ်။
ကျနော်တို့နည်းပညာနှင့် android ကြိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်တရားမ ၀ င်တဲ့ကိစ္စတွေ၊
ဒီဘလော့ဂ်ကိုညှိနှိုင်းရေးမှူးကဘယ်သူလဲ။ ဒါမှမဟုတ်အယ်ဒီတာချုပ်။ မှတ်ချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်မထားဘူးလား
ငါကိုယ်တိုင် Androidsis ၏ညှိနှိုင်းရေးမှူးဖြစ်ပြီးသင်ဤ post ကိုသင်ပေးချင်သောအရှုပ်တော်ပုံကိုမတွေ့ရပါ။ ၎င်းသည်၎င်းကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုရန်အတွက်သာဖြစ်ပြီး၊ သင်စူးစမ်းနိုင်သည်ဆိုပါက၎င်းကိုရှင်းပြရန်နှင့်မီးမောင်းထိုးပြနိုင်သော်လည်း၎င်းမှာမပြောသင့်ပါ ကိုယ်ကျင့်တရားအရ၎င်းသည်တရားမ ၀ င်ပြစ်တင်ရှုတ်ချမှုရှိသည့်အတိုင်းပြုလုပ်ပါ။ ၎င်းသည်တစ်ခုချင်းစီ၏ကိုယ်ကျင့်တရားအတိုင်းဖြစ်သည်။
ဝမ်းသာလိုက်တာ၊ မင်းညှိနှိုင်းရေးမှူးဆိုတာမင်းမသိဘူး အခုငါအများကြီးပိုပြီးနားလည်သဘောပေါက်။
ယုတ္တိယုတ္တိရှိပြီးသင်သည်ပြtroubleနာများစွာကိုမတွေ့ပါကသင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်။ လူတွေရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားနောက်ကွယ်မှာပုန်းနေပေမယ့်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတယ်။ ဒါက "ပြီးပြည့်စုံတဲ့ရာဇ ၀ တ်မှုကိုလေ့လာပါ" လို့ပြောတာပါ။ ပြီးတော့ဒါကသင့်ကျင့်ဝတ်အောက်မှာအားလုံးပြောတာပဲ။
သင်၏ချစ်သူသို့မဟုတ်အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်း၏မက်ဆေ့ခ်ျများကိုသူတို့မသိရှိဘဲသူလျှိုကဲ့သို့သောအရာများကိုမစုံစမ်းသင့်ပါ။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ရာဇ ၀ တ်မှု၊ ကာလဖြစ်သည်။
“ ငြီးငွေ့ဖွယ်အကောင်းဆုံးအရာကသင် ၁၀ စက္ကန့်ထက်မပိုကြာသော်လည်းသင်ကိုယ်တိုင်လက်ဖြင့်သွားရန်ဖြစ်သည်” နှင့် ပတ်သက်၍ သင်ဘာပြောသနည်း။
ကျွန်ုပ်သည် ထပ်မံ၍ ရှင်းပြပြီး၊ ဤအက်ပလီကေးရှင်းကိုကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုရန်အတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ WhatsApp ကိုမိုဘိုင်းဖုန်းနှစ်လုံးတွင်တစ်ပြိုင်တည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုအတည်ပြုခြင်း၊ အကောင့်တစ်ခုနှင့်သင်ပြောင်းလဲသည့်အခါတိုင်းအခြားအရာတစ်ခုကိုသက်ဝင်စေခြင်းနှင့်ရပ်ဆိုင်းခြင်းမလိုဘဲတစ်ချိန်တည်းတွင်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းထက်မကဆိုလိုသည် မိုဘိုင်း။ ဗွီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ရှင်းပြတာကခင်ဗျားရဲ့ရည်းစား၊ ရည်းစား၊ ဒါမှမဟုတ်အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းကသူတို့ရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းကိုစားပွဲပေါ်ကနေစွန့်ခွာသွားသလိုမျိုး၊ ငါသဘောမတူဘူး၊ ငါကိုယ်တိုင်ဘယ်တော့မှလုပ်မှာမဟုတ်တဲ့ WhatsApp ကို hack ဖို့အခွင့်အရေးယူနိူင်တယ်။ , တူညီတဲ့အရာဆယ်မိနစ်အတွင်းဤ app ကိုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်သည်မျက်နှာသာပေးမှုလည်းမဟုတ်၊ app ကိုဆန့်ကျင်ခြင်းလည်းမရှိကြောင်း၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းနိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုသာရှင်းပြပြီးတာဝန်တစ်ခုချင်းစီနှင့်သူတို့၏ကိုယ်ကျင့်တရားအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
လက်နက်အမျိုးမျိုးရောင်းချသောလက်နက်များလည်းရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ထိုသူများကိုသတ်ဖြတ်ရန်သင်မရည်ရွယ်ဘဲ၊ တီဗွီဇာတ်လမ်းတွဲများနှင့်သူတို့ကသင့်အားစုံလင်သောရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်ရန်နေ့စဉ်သင်ကြားပေးသည့်ရုပ်ရှင်များတွင်ပါ ၀ င်သည်။ မည်သည့်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ရန်။ တစ် ဦး ချင်းစီ၏မူများနှင့်ကျင့် ၀ တ်များနှင့်အညီသွားသည်ကိုငါထပ်ခါတလဲလဲပြောခဲ့သည်။
ဖခင်တစ် ဦး ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ ဥပဒေအားလုံးကမိဘတွေကိုသူတို့ရဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာအားလုံးသတိရမိတယ်။ ၎င်းကိုထောက်ခံသည့်တရားရုံးချုပ်၏စီရင်ချက်ရှိသည်။
လွဲမှားသောစိတ်ကိုတစ်ခုတည်းကိုမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုရှင်းပြပြီးဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကအသုံးပြုမှုတစ်ခုချင်းစီအတွက်တာဝန်ယူမှုရှိသည်ဟုလွဲမှားစွာဖော်ပြသည်။ ဒီကောင်းမြတ်မှုကအင်တာနက်ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဟာကမ္ဘာပေါ်မှာရာဇ ၀ တ်မှုတွေကိုအဆုံးသတ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တဲ့သူတချို့အပေါ်ကျွန်တော့်ကိုဆွဲဆောင်ထားတယ်။
လူသတ်သမားများနှင့်အကြမ်းဖက်သမားများက၎င်းကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေဗုံးကြဲလေယာဉ်များကို ဆက်သွယ်၍ စုဆောင်းရန်အသုံးပြုကြသောကြောင့်၎င်းသည် Facebook ကိုဝေဖန်ရန်သို့မဟုတ်တိုက်တွန်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဒီဆောင်းပါးကိုကျွန်တော်အရမ်းသဘောကျတယ်၊ ပြီးတော့ကျွန်တော့်ကလေးတွေကိုမူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ပိုဆိုးလာတာကိုတားဆီးနိုင်မှာသေချာတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ မင်းကိုငါပြောမယ်က WhatsApp မှာမင်းလုပ်သမျှအားလုံးကိုကြည့်တော့မယ်။
ဟယ်လိုမင်းဒီ application ကိုဘယ်လောက်ကြာကြာရယူနိုင်မလဲ၊ အချိန်ကန့်သတ်ချက်ရှိပါသလား သို့မဟုတ်ကျနော်တို့မွမ်းမံစောင့်ရှောက်သင့်သလဲ
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်းသည် iPhone အတွက်လျှောက်လွှာကိုရရှိနိုင်သည်။
Jose Antonio Juarez Cruz ဟုသူကပြောသည်
ထို့အပြင်၎င်းအားအားလုံးသည်ကိစ္စရပ်အားမည်သည့်ရှုထောင့်မှရှုမြင်ပုံပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ဤအချက်အလက်များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုကွန်ယက်များ (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏ဆွေမျိုးသားချင်းများ၏ပုံတူမျိုးပွားခြင်းနှင့်သင့်လျော်သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်နိုင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုသိရှိနိုင်သည်။
Jose Antonio Juarez Cruz ကိုပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ဂွာတီမာလာမှကျွန်ုပ်ပါ။ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါမပေါ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့်ဖြစ်မှာဖြစ်လို့သင်သိတဲ့အခြား application တစ်ခုရှိသေးတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဖြေကိုစောင့်ပါ့မယ်။
Tania Ramos ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်က play store တွင် clonezap application ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ကြိုးစားသော်လည်း၊ နမူနာသည်၎င်းကိုကျွန်ုပ် download လုပ်နိုင်သောနေရာတွင်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိတော့ပါဟုမပြောနိုင်ပါ။ Gracoas
Tania ramos သို့စာပြန်ပါ
Paola Cincunegui ဟုသူကပြောသည်
ငါ download လုပ်လို့မရဘူး ???
Paola Cincunegui အားပြန်ပြောပါ
လူကြီးမင်းတို့သွားကြစို့၊ တစ်ယောက်ယောက်ကဒီလျှောက်လွှာကိုမှားယွင်းတဲ့နည်းနဲ့ (ကိုယ်ကျင့်တရား) နဲ့အသုံးပြုတယ်ဆိုရင်အတူတူပါပဲ။ လမ်းပေါ်မှာတစ်ယောက်ယောက်ကိုလမ်းလျှောက်ဖို့ရှာနေတဲ့ကားတစ်စီးထဲကိုဝင်လာတာထက် ... အရာရာတိုင်းဟာသင့်အပေါ်မူတည်သည်။ သင်မည်ကဲ့သို့အသုံးပြုသည်၊ နှင့်သင်မောင်းနှင်လိုသည့်ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ။
အော်ဒီယိုကိုဒေါင်းလုပ်ချရန်လျှောက်လွှာကခွင့်မပြုပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ထိုအထူးစကားပြောခန်း၏အသံကို download လုပ်ရန်လိုအပ်ပါကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။ ??????
ကျနော့်အမြင်မှာ WhatsApp ကိုယ်နှိုက်ကအယုံကြည်ရဆုံး application မဟုတ်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအလုပ်အတွက်အသုံးပြုသည်နှင့်ချက်ချင်းပင်ကျွန်ုပ်၏ဒေတာလုံခြုံမှုရှိစေရန်နှင့်မည်သည့်စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်မဆိုကျွန်ုပ်၏အကောင့်ကိုအသုံးပြုနိုင်ရန် mSpy ကိုချက်ချင်း install လုပ်ခဲ့သည်။
မင်္ဂလာပါ။ Clonezap အက်ပလီကေးရှင်းရှိတယ်၊ သင်အဲဒါကို Android စာရင်းထဲမှာရနိုင်သည်။
Liria အပြေးသမား ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ Francisco၊ မင်းရော